1 Tantara 8 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
1 Tantara 8:1-40
8 Ary ireto avy ny naterak’i Benjamina:+ I Bela+ no lahimatoa, Asbela+ no faharoa, Ahara+ no fahatelo, 2 Noha+ no fahefatra, ary Rafa no fahadimy. 3 Ary ny zanakalahin’i Bela dia i Adara sy Gera+ sy Abihoda, 4 sy Abisoa sy Namàna sy Ahoa, 5 sy Gera sy Sefofana+ ary Horama.+ 6 Ary ireto avy ny zanakalahin’i Ehoda, izay samy lohan’ireo fianakaviamben’ny mponina tao Geba,+ sady nanao sesitany an’ireo mponina ireo tany Manahata: 7 Namàna sy Ahia ary Gera. Ary i Gera no nanao sesitany azy ireny. Izy no niteraka an’i Oza sy Ahihoda. 8 Ary niteraka tany ambanivohitr’i+ Moaba i Saharaima rehefa avy nandefa ny olona tao. Ary i Hosima sy Bara no vadiny. 9 Ary i Hodesy vadiny no niterahany an’i Jobaba sy Ziba sy Mesa sy Malkama, 10 sy Jeoza sy Sakia ary Mirma. Ireo no zanakalahiny, izay samy lohan’ireo fianakaviambe. 11 Ary i Hosima no niterahany an’i Abitoba sy Elpala. 12 Ary ny zanakalahin’i Elpala dia i Ebera sy Misama sy Samada, izay nanorina an’i Ono+ sy Loda+ mbamin’ireo tanàna niankina taminy, 13 sy Beria ary Sema. Lohan’ireo fianakaviamben’ny mponina tao Aialona+ izy ireo. Ary izy ireo no nandroaka ny mponina tao Gata. 14 Ary i Ahio sy Sasaka sy Jeremota, 15 sy Zebadia sy Arada sy Edera, 16 sy Mikaela sy Jispa ary Joha no zanakalahin’i Beria.+ 17 Ary i Zebadia sy Mesolama sy Hizky sy Hebera, 18 sy Jismeray sy Jizlia ary Jobaba no zanakalahin’i Elpala. 19 Ary i Jakima sy Zikry sy Zabdy, 20 sy Elienay sy Ziletahy sy Eliela, 21 sy Adaia sy Beraia ary Simrata no zanakalahin’i Simey.+ 22 Ary i Jispana sy Ebera sy Eliela, 23 sy Abdona sy Zikry sy Hanana, 24 sy Hanania sy Elama sy Antotia, 25 sy Jifdia ary Penoela no zanakalahin’i Sasaka. 26 Ary i Samseray sy Seharia sy Atalia 27 sy Jaresia sy Elia ary Zikry no zanakalahin’i Jerohama. 28 Lohan’ireo fianakaviambe izy ireo, araka ny voasoratra tao amin’ny tetirazana. Ireo no nonina tao Jerosalema.+ 29 Ary tao Gibeona+ no nonenan’i Jeiela rain’i Gibeona, ary Maka no anaran’ny vadiny.+ 30 Ary i Abdona no zanany lahimatoa, ary nanarakaraka azy i Zora sy Kisy sy Bala sy Nadaba,+ 31 sy Gedora sy Ahio ary Zakera.+ 32 Ary i Miklota niteraka an’i Simea.+ Ry Simea no nonina tao Jerosalema tandrifin’ireo rahalahiny ireo, sady niara-nonina tamin’ny rahalahiny hafa. 33 Ary i Nera+ niteraka an’i Kisy,+ ary i Kisy niteraka an’i Saoly,+ ary i Saoly niteraka an’i Jonatana+ sy Malkisoa+ sy Abinadaba+ ary Esbala.+ 34 Ary ny zanakalahin’i Jonatana dia i Meri-bala,+ ary i Meri-bala niteraka an’i Mika.+ 35 Ary ny zanakalahin’i Mika dia i Pitona sy Meleka sy Tarea+ ary Ahaza. 36 Ary i Ahaza niteraka an’i Joada, ary i Joada niteraka an’i Alemeta sy Azmaveta ary Zimry. Ary i Zimry niteraka an’i Moza, 37 ary i Moza niteraka an’i Binea, ary i Binea niteraka an’i Rafa,+ ary i Rafa niteraka an’i Elasa, ary i Elasa niteraka an’i Azela. 38 Ary i Azela nanan-janakalahy enina ka ireto avy ny anarany: Azrikama sy Bokero sy Ismaela sy Searia sy Obadia ary Hanana. Ireo rehetra ireo no zanakalahin’i Azela. 39 Ary ny zanakalahin’i Eseka rahalahiny, dia i Olama no lahimatoa, Jeosy no faharoa, ary Elifeleta no fahatelo. 40 Lehilahy natanjaka sy nahery fo+ ary nahay nampiasa tsipìka+ ny zanakalahin’i Olama, sady nanana zanaka+ aman-jafy maro niisa dimampolo amby zato. Ireo rehetra ireo no taranak’i Benjamina.
1 Tantara 8